Safaaradda mareykanka oo beenisay in ay qorot dad u basaasa howlaha ururka xisbullah – SBC
Safaaradda mareykanka oo beenisay in ay qorot dad u basaasa howlaha ururka xisbullah
Posted by editor on Juun 26, 2011 Comments
Beirut:- Afhayeenka safaaradda mareykanka dalka Lubnaan ayaa beeniyey eedeemo uu u soo jeediyey xoghayaha guud ee ururka xisbullah Sheekh Xasan Nasrallah oo ku aadan in safaaradda mareykanka ee dalka Lubnaan ay tahay xarun lag qoro jawaasiista islamarkaana ay u adeegto xukuumadda Yuhuuda.
Afhayeenka oo la hadalyey wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in eedeemadan ay yihiin kuwo ay marar badan ka maqleen xisbullah balse uu xisbigu ku jiro mushaakil daakhili ah maadaama uu ku jiro liiska mareykanka ee ururada argagaxisada, waa suu hadalka u dhigayee.
Afhayeenka ayaa ku nuuxnuuxsaday in mowqifka mareykanka ee ururka xisbullah uu yahay mid macruuf ah aysan waxba iska badalin.
War saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda mareykanka ee Beirut ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shaley uu shaaca ka qaaday Xoghayaha guu ee ururka Xisbullah Sheekh Xasan Nasrallah in xisbigiisu uu gacanta ku dhigay saddex jawaasiis oo xubno ka ahaa ururka uu hogaamiyo ee Xisbullah.
Nasrallah ayaa tilmaamay in saddexda la qabtay labo kamid ah ay la shaqeenayeen mukhaabaraatka mareykanka halka kan kalana uu xiriir la lahaa mukhaabraat Yurubiyaan ah.
Nasralla waxa uu carabaabay in shakhsiyaatkan aysan kujirin safafka hore ee xisbiga ama culimaa’udiinka ama aysan ahayn kuwo ka agdhow xoghayaha guud ee Xisbullah sida ay tilmaamtay qaar kamid ah warbaahinta.
Sheekh Xasan Nasrallah waxa uu ku nuuxnuuxsaday in guul darada Israel ee kala kulantay dhexgalka ururka xisbullah ay keentay in ay adeegsato sirdoonka mareykanka.
Nasrallah waxa uu tilmaamay in safaaradda mareykanka ee xarunta dalka Lubnaan Beirut ay noqotay hoyga jawaasiista iyo xarunta laga diiwaan geliyo daba dhilfka danaha Yuhuuda sidoo kalana sirdoonka mareykankuna uu beegsanayo xisbullah.